Etu esi hazi APN iji nweta data mkpanaka | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | Ndị ọrụ ekwentị, Nkuzi
El APN (Aha Aha Nweta) bụ aha nnweta uzo na ndị ọrụ ekwentị taa na-ahazi ịnye njikọ Internetntanetị na ekwentị anyị. Na APN Enwekwara ike ịnata ugbu a MMS (Multimedia Messaging Service), nke ochie, nke a maara dị ka ọrụ izipu ozi ọtụtụ.
Onye ọrụ ahụ na-akpakọrịta na-akpaghị aka site na kaadị SIM, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ okwu iji hazigharịa oke a, otu n'ime ha bụ ma ọ bụrụ na anyị wụnye gam akporo ROM. Ọ bụ naanị ikpe, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na mbụ anyị zụtara ekwentị n'efu ma ọ bụ ọ bụrụ na ị jiri SIM abụọ.
Taa na Androidsis anyị ga-akọwa Nzọụkwụ site na nhazi iji hazie APN iji nweta data mkpanaka na gam akporo, usoro ihe kariri oge tozuru oke. Na nke a, anyị ga-agbakwunye data nke ndị ọrụ niile ejiri rụọ ọrụ na Spain, ma ezigbo ndị ọrụ mkpanaka na ndị na-ahụ maka ekwentị mkpanaaka.
1 Gịnị bụ APNs?
2 Ebee ịchọta ntọala APN na gam akporo?
3 Data kwekọrọ na APNs nke ndị ọrụ ekwentị isi na Spain
Gịnị bụ APNs?
APN bụ Aha Aha Aha, ọ na-erube isi na ngalaba aha usoro (DNS) mgbakọ na ozugbo kpebiri na ọ ga-enye adreesị IP. Ekwentị mkpanaka ọ bụla ga-enwerịrị APN iji nweta netwọkụ dabere na GPRS ma ọ bụ ụkpụrụ dịka 3G, 4G na 5G.
una APN nwere akụkụ abụọ: Nchọpụta Onye Ọrụ na Nchọpụta Ntanetị Ihe njirimara onye ọrụ bụ ịkọwapụta ngwugwu nke ngalaba netwọk akọwapụtara. Ihe nyocha ntanetị na-akọwapụta netwọkụ dị na mpụga nke GPRS ga-ejikọ mgbe niile.
Ebee ịchọta ntọala APN na gam akporo?
Ọ bụ a pụtara mfe nzọụkwụ, n'ihi na nke a anyị nwere iji nweta Ntọala> Neti na Ntanetị / Njikọ ikuku> Neti anya ekwentị> APN. Ozugbo n'ime APN, ubi ga-apụta iji jupụta n'ọtụtụ ubi, sitere na aha APN, aha njirimara, paswọọdụ na nhọrọ ndị ọzọ.
Ke kpukpru ata na mebere rụọ, ọ na-emekarị ihe jupụtara n'ime atọ dị mkpa ubi, nke Aha APN, aha njirimara na paswọọdụ, ọ bụ ezie na ọ gaghị ajụ anyị mgbe niile maka aha njirimara-paswọọdụ. O zuru ezu iji jupụta mpaghara ndị a ma chekwaa nhazi ahụ iji nwee ike iji njikọ atntanetị na ọsọ ọsọ.
Data kwekọrọ na APNs nke ndị ọrụ ekwentị isi na Spain
Enwere ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ aha njirimara na paswọọdụ, ndị ọzọ na-ahọrọ ka ahapụ ya oghere, yabụ ndị ọrụ nwere - akara adịghị mkpa ịbanye aha njirimara ma ọ bụ paswọọdụ.
Movistar telefonica.es ekwentị ekwentị
Orange oroma oroma oroma
amena oroma oroma oroma
Uzoigwe ịntanetị - -
Emepe nnenwetavil.tv Onye ahịa Meghee
ONO ịntanetị.ono.com - -
simio oroma - -
Ekwentị mkpanaka oroma oroma oroma
Euskaltel Nke ahu - -
Ekwentị internet - -
Tuenti tuenti.com nke ọma nke ọma
obere obere.private.omv.es - -
digimobile ịntanetị.digimobil.es - -
Lebara Ekwentị gprsmov.lebaramobile.es - -
O2 telefonica.es ekwentị ekwentị
Ụlọ ọrụ Telele ịntanetị - -
Carrefour Ekwentị CARREFOURINTERNET - -
Eroski Ekwentị grrs.eroskimovil.es wap @ wap wap125
Ebubo ịntanetị - -
Njikọ Fi fi.omv.es - -
Na akụ Mobile tel.hitsmobile.es - -
Kpọọ ugbu a internet - -
Ekwentị mkpanaaka inet.es - -
YouMobile ịntanetị - -
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi hazie APN iji nweta data mkpanaka